Izinzwa ze-Arduino, inhlanganisela enhle yabasebenzisi be-novice | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Izinzwa ze-Arduino, inhlanganisela enhle yabasebenzisi be-novice
Ukusebenza ne-Arduino kungaba namandla kakhulu futhi kwehluke, kepha ukuze sifeze lokhu kudingeka sibe nolwazi oluphambili nolwehlukahlukene ngokusebenza kwe-Arduino nezinsiza zayo ezahlukahlukene.
Enye yezesekeli eziqala ukusetshenziswa ngokushesha inzwa. Umsebenzi walezi ne-Arduino ungaholela kumaphrojekthi athakazelisayo, kodwa hhayi lokho kuphela kepha kuzosisiza ukuthi sikuqonde kangcono ukusebenza kwebhodi lethu nokuthi singawakha kanjani amaphrojekthi ngeFree Hardware.
1 Yini izinzwa ze-Arduino?
2 Yiziphi izinhlobo zezinzwa ezikhona ze-Arduino?
3 Ngingayisebenzisa yini inzwa uma ngingumsebenzisi we-novice?
4 Yiziphi izinzwa ezinconyelwe ukusebenzisa ku-Arduino?
Yini izinzwa ze-Arduino?
Enye yezinto ezidume kakhulu futhi ewusizo lapho usebenza namabhodi we-Arduino Project izinzwa. Izinzwa yizinto ezisivumela ukuthi sandise ukusebenza kwebhodi, zisebenza njengezigcwalisi noma izesekeli ezingezwe kupuleti elilodwa noma amaningi. Okwamanje, Ibhodi le-Arduino, ngokwalo, alikwazi ukuthatha noma yiluphi ulwazi oluvela ngaphandle noma kumongo ozungezile., ngaphandle uma kubalulekile ukuthi iqukethe idivayisi entsha.
Ngaphandle kwalokho, imininingwane kuphela esiyithumela ngamachweba asemabhodini angasetshenziswa. Uma sifuna ukuthatha imininingwane evela ngaphandle, kufanele sisebenzise izinzwa kuphela.
Ayikho inzwa ejwayelekile, okungukuthi, kunezinhlobo eziningi zezinzwa njengoba kunezinhlobo zolwazi esifuna ukuzithwebula, kodwa akumele sikhohlwe ukuthi lolu lwazi alusoze lwacutshungulwa kepha luyoba ulwazi oluyisisekelo. Ukucutshungulwa kolwazi kuzokwenziwa yi-Arduino noma ibhodi elifanayo elisebenza njengebhuloho noma isikhombimsebenzisi semidiya phakathi kolwazi oluqoqiwe nedatha etholwe yisoftware.
Yiziphi izinhlobo zezinzwa ezikhona ze-Arduino?
Njengoba sishilo ngaphambili, kunezinhlobo eziningi zezinzwa ze-Arduino. Okuthandwa kakhulu yizinzwa ezihlobene nesimo sezulu, yilezi: inzwa yokushisa, inzwa yomswakama, inzwa yokukhanya, inzwa yegesi noma inzwa yengcindezi yasemkhathini. Kepha kunezinye izinhlobo zezinzwa esezidumile ngenxa yamadivayisi eselula njenge-sensor yezigxivizo zeminwe, i-iris sensor noma inzwa yezwi (akumele ididaniswe nombhobho).
I-Los ama-thermometer Ziyizinzwa eziqoqa ukushisa okushisa okuzungeze inzwa, kubaluleke kakhulu ukukhumbula lokhu ngoba akuyona ukushisa kwepuleti kodwa kwenzwa. Imininingwane etholakalayo ithunyelwa ebhodini le-Arduino futhi ayisivumeli ukuthi sisebenzise umhlangano kuphela njenge-thermometer kodwa futhi sisebenzise nezinhlelo ezenza izinto ezahlukahlukene ngokuya ngamazinga okushisa kwangaphandle kwensimbi.
El inzwa yomswakama Isebenza cishe ngokufana nohlobo lwangaphambilini lwenzwa, kepha kulokhu inzwa iqoqa umswakama ozungeze inzwa futhi singasebenza ngayo, ikakhulukazi ezindaweni zezolimo lapho umswakama wezitshalo ubuye uguquguquke ukucatshangelwa.
El inzwa yokukhanya igxume yaduma ngemuva kokusebenza kwayo kumadivayisi eselula. Umsebenzi odume kakhulu ukufiphaza noma ukwenza izenzo ezithile ngokususelwa ekukhanyeni okutholwa yidivayisi. Endabeni yezingcingo eziphathwayo, kuye ngezinga lokukhanya okutholwa inzwa, isikrini sedivayisi sishintsha ukukhanya. Uma sibheka lokhu, singabona ukuthi amaphrojekthi ahlobene nezwe lezolimo abheka lolu hlobo lwezinzwa ze-Arduino.
Uma sifuna umshini wokuphepha, ukuhlela noma ukumane ufinyelele isoftware ye-Arduino, inketho enhle ukusebenzisa inzwa yezigxivizo zeminwe. Inzwa ezosicela izigxivizo zeminwe ukuvimba noma ukuvulela ukufinyelela. Inzwa yezigxivizo zeminwe yathandwa isikhathi esithile, kepha kuyiqiniso ukuthi kuze kube manje ayikho eminye imisebenzi eminingi engaphezulu kokuvulwa kwezinto.
Inzwa yezwi ibuye ibhekiswe ezweni lezokuphepha yize kulokhu kungathathwa kalula kuyiswe kweminye imihlaba efana nezwe le-AI noma abasizi bezwi. Ngakho-ke, ngenxa yenzwa yezwi, isipikha esihlakaniphile siyakwazi ukubona imisindo futhi sihlukanise izindima noma izinhlobo ezahlukahlukene zabasebenzisi ngokususelwa kuthoni yezwi esizihlanganisa nayo. Ngeshwa yomibili inzwa yezigxivizo zeminwe kanye nenzwa yezwi izinzwa ezibiza kakhulu futhi kunzima ukuzithola nokusebenza nazo, okungenani kubasebenzisi be-novice Arduino.
Ngingayisebenzisa yini inzwa uma ngingumsebenzisi we-novice?
Umbuzo wamarandi ayisigidi wabafundi abaningi balesi sihloko ukuthi kungenzeka yini ukusebenzisa izinzwa ezinolwazi oluncane. Impendulo inguyebo. Kungaphezulu, imihlahlandlela eminingi incoma ukusebenzisa izinzwa ngokushesha nge-Arduino, ukuze kusheshiswe ukufunda kwakho.
Imvamisa ufunda ukusebenzisa izibani ze-LED kuqala, iphrojekthi esheshayo nelula yokufunda. Kamuva, inzwa yokushisa noma inzwa yomswakama yaqala ukusetshenziswa, izinzwa ezisebenziseka kalula, ezitholakala kalula futhi zinamaphrojekthi amaningi asiza ukufunda ukusebenzisa lezi zinhlobo zamadivayisi.
Yiziphi izinzwa ezinconyelwe ukusebenzisa ku-Arduino?
Kunezinhlobo eziningi zezinzwa futhi ngayinye yazo akhiqizwa ngemikhiqizo ehlukahlukene, ngakho-ke inani lezinzwa liphakeme kakhulu. Uma sifuna ukudala iphrojekthi ngenzwa eyodwa noma ngezinzwa eziningi, okokuqala kufanele sinqume ukuthi le phrojekthi izoba nayiphi impilo. Uma sizokwakha iyunithi eyodwa enohlobo oluthile, kungcono ukukhetha ukusebenzisa izinzwa ezisezingeni eliphakeme, ukuze lolu lwazi lunembe ngangokunokwenzeka.
Uma kunalokho sifuna dala iphrojekthi ezophindwaphindwa kakhulu, okokuqala ngincoma ukusebenzisa inzwa eshibhile esingayitholaKamuva, lapho siqinisekisa ukuthi kuyasebenza, lapho-ke sizohlola izinhlobo eziningana zezinzwa ezinomsebenzi ofanayo. Kamuva, lapho silawula ngaphezulu kwezinzwa, sizokwazi vele ukuthi imuphi imodeli noma uhlobo lwenzwa esizoyisebenzisa lapho sizokwakha iphrojekthi entsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Izinzwa ze-Arduino, inhlanganisela enhle yabasebenzisi be-novice
Imininingwane enhle kakhulu, ngubani kini ongacela eyodwa?
Inzwa yokushisa ye-Arduino